Ihe ụfọdụ na-eme ka e nwee nsogbu na ntanetị weebụ Site na ọkachamara n'ọkụ
Ruo afọ ole na ole gara aga, otu òtù na-akwado XBMC nọ na-ahụ na nke ahụ ndị ahịa na-eji atụmatụ nke ịhazi mgbasa ozi na ọdụ data na-akpaghị aka. Iji nwee obi eziokwu, XBMC enweghi nsogbu na mmemme ị na-eji ijide nchekwa data na ihe nkiri gị. Maka ozi gị, ikike ịhazi ihe ntanetị ihe nkiri na-akpaghị aka bụ XMBC kachasị mma n'ahịa ahịa.
Maka ndị na-amalite, a mkpokọta weebụ bụ ihe akpaaka nke na-ewepu data gbasara mgbasa ozi gị na vidiyo na-amasị gị site na saịtị ndị kachasị mmasị ma dị mkpa, wee zigachaa ya ozi gbasara XBMC - off white wedding hat. Maka ndị ọrụ na-eguzosi ike n'ihe bụ ndị na-ahụbeghị, XBMC gụnyere ihe ntanetị nke na-ewepụta ihe ntanetị nke na-anakọta ozi gbasara ihe nkiri na ihe nkiri nkiri iji gboo mkpa gị.
Na-emekarị, XBMC na-ehichapụ na mmelite nchịkọta ihe nchọgharị weebụ na-enyere ndị ahịa aka. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, XBMC na-agbakwụnyekwa atụmatụ ndị ọhụrụ iji nyere ndị na-ahụ nkiri nkiri aka ịmata ọrụ amara na mkpuchi ngwa ngwa. Iji melite nsonaazụ ntanetị weebụ gị na inbuilt na nchekwa data gị, gaa na 'Set Content' nhọrọ ma kwenye na usoro na ọnọdụ ọhụrụ.
Otu esi esi mbupụ ụlọ akwụkwọ ntaneti gị gaa na nfo faịlụ
Ọtụtụ ndị ọrụ na-eguzosi ike n'ihe na-eji njikwa nfo iji hazie mmasị ndị mgbasa ozi. Ị na-arụ ọrụ na ịmepụta ndabere nke onyinyo gị na nhazi nkọwa? XBMC kwadoro nhọrọ a.
Iji bubata ụlọ akwụkwọ ịchọta ọkacha mmasị gị na nfo faịlụ, pịa 'Export Video Library' n'okpuru 'Videos Eto.' Na-enye aka na data nchekwa XBMC
XBMC gụnyere nke obodo dabeere na ntanetị nke na-agụnye ike na ntanetị. ndị na-akwado ndị ọrụ na onyinye. XBMC nchekwa data na-arụ ọrụ na-agba ndị ọrụ ume inye onyinye maka ihe omimi ha, ihe oyiyi, na ihe ngosi kwa ụbọchị. na 'Set Content' n'okpuru nyocha nke saịtị ahụ
XBMC gụnyere nke ndị ọrụ ntanetị nwere ike ịntanetị na-enye ọrụ ndụmọdụ maka ndị na-ede blọgụ na ndị ọrụ njedebe.Ma, ị nwere ike inyere aka chekwaa ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọmụma dị mkpa na XML Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ịma aka ọ bụla ihu mgbe ị na-ebubata ihe nkiri gị na ụlọ akwụkwọ gị, malite mkparịta ụka na ndị ọrụ nkwado maka enyemaka.
I nwekwara ike inye aka dozie nsogbu ahụ iji nkuzi na XBMC Wiki na nchịkọta ihe ntanetị weebụ. Nye ndị ọrụ ahụmahụ, iji ihe ntanetịime weebụ iji mepụta ntụgharị ihuenyo dị ịtụnanya bụ ọrụ dị mfe iji malite. Otú ọ dị, ahụmịhe ahụ nwere ike ịbụ ihe na-agwụ ike maka ndị na-ebido. Na-enye onyinye gị na nkuzi iji zọpụta ndị na-amalite ịntanetị site n'ichepụta ha n'Ịntanet.
Ndị na-ederede weebụ na-arụ ọrụ dị mkpa n'inyere ndị na-ede blọgụ na ndị na-ekiri fim aka izute ụlọ akwụkwọ ha chọrọ. Ndị na-ekpuchi akwụkwọ na-ekwe ka ndị na-anụ ọkụ n'obi gụgharịa site na ụlọ ọrụ ọhụụ na ihe nkiri ndị dị na fim n'ebughị ụzọ merie nsogbu. Ekwela ka njikwa data dọrọ gị ọrụ ịntanetị. Ị nwere ike iji scrapers website iji nweta data ga-egbo mkpa gị na nkọwa gị. I nwekwara ike iji njirimara kachasị ike nke XBMC iji hazie ma jikwaa nchekwa data gị.